ပိတ်ရက်အလွန်မှာ အရောင်းအဝယ်တွေကို ထိန်းထားသင့်သလား?
စနေ၊ တနင်္ဂနွေအလွန်မှာ အရောင်းအဝယ်များကို ဆက်ထိန်းထားပါ: သင့်အခွင့်အရေး (သို့) ကျရှုံးမှု?
ပိတ်ရက်အလွန်မှာ အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ဆက်ဖွင့်ထားသင့်၊ မသင့်ကို တွေးဖူးပါသလား? တွေးဖူးပါက၊ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးက သင့်အတွက် အမြတ်အမြဲရစေလား? မတွေးဖူးပါက၊ သံသယနဲ့ ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ထားပြီး၊ စမ်းကြည့်မလား?ပိတ်ရက်အလွန်မှာ ဆက်ရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်သိထားသင့်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းထားပါတယ်။
ပိတ်ရက်အလွန်ထိ ရောင်းဝယ်ခြင်းဟာ ဘေးကျပ်နံကျပ်အခြေအနေပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာ ပိတ်ရက်မတိုင်ခင် သင်ထည့်မစဉ်းစားခဲ့သည့် မမျှော်လင့်ထားသည့် သတင်းများ၏ ၊ ဈေးကွက်ကို လာရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အရှုံးကြီးကြီးကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ပိတ်ရက်မတိုင်ခင် အရောင်းအဝယ်ပိတ်လိုက်ပြီး၊ အမြတ်ရမည့်အရောင်းအဝယ် အခွင့်အလမ်းကို အရှုံးခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ရက်ပြီးနောက် ဈေးနှုန်းမှ သင့်လမ်းအတိုင်း ဆက်ရွေ့နေပေမယ့်၊ ဒီအရောင်းအဝယ်ကို ဝင်နိုင်ရန် အမှတ်မရှိတော့ဘဲ၊ အဝင်မှတ်ကောင်းကောင်းတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားပြီဟုပဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။
ဒါဆို၊ ပိတ်ရက်အလွန်ထိ အရောင်းအဝယ်ဖွင့်ထားသင့်သလား? တိကျတဲ့အဖြေကို မျှော်လင့်ထားရင်တော့၊ ဒီမှာရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရောင်းအဝယ်ဆက်ဖွင့်မထားခင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အကြောင်းအရင်းအများကြီးရှိပါတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့၏ အရင်ဆောင်းပါးကို သင်ဖတ်ထားပါက၊ မတူညီတဲ့အရောင်းအဝယ် ကိစ္စရပ်တိုင်းအတွက် အချိန်ကာလများသည် အရေးကြီးကဏ္ဍကနေပါဝင်ကြောင်း သင်သတိပြုမိမှာပါ။ ဒီကိစ္စဟာလဲ ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။
သင်သည် ရေရှည်ရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပါက၊ အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ်အတွင်း သင့်အနေအထားဖွင့်ထားပါ၊ ဒီပြဿနာက သင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့် ယာယီဈေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမဆို သင့်အရောင်းအဝယ်အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ သင်ဟာ တစ်နေ့တာ ရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပါက၊ သင့်အရောင်းအဝယ်များသည် မိနစ်များစွာမှ နာရီပေါင်းများစွာလောက်ပဲ ခံမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒီမေးခွန်းက သင့်အတွက်လဲမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အကယ်၍သင်ဟာ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကို ရက်ပေါင်းများစွာထားသည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပါက၊ ပိတ်ရက်ကိုလွန်ပြီး အရောင်းအဝယ်ဆက်ဖွင့်ထားဖို့ ထည့်စဉ်းစားရပါမည်။
ပိတ်ရက်လွန်ပြီး အရောင်းအဝယ်ဆက်ထားပါက၊ မှန်ကန်တဲ့အချိန်ကာလမှာ ရောင်းဝယ်မှာသေချာပါစေ။ H4၊ နေ့စဉ် အချိန်အပိုင်းအခြားများသည် ဒီအခွင့်အရေးကို ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။
စွန့်စား/ဆုလဒ် အချိုး (သင့်အလားအလားရှိတဲ့ အမြတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးဖို့တတ်နိုင်လဲ) ဆိုတာကို အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ အခြေနေတစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံးသော စွန့်စား/ဆုလဒ် အချိုးမှာ ၁:၃ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလားအလာရှိသည့် အမြတ်သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် အရှုံးထက် ၃ဆပိုမြင့်မားခြင်းဖြစ်သည်။ ပိတ်ရက်များပြီးနောက် အရောင်းအဝယ်သည် သင်နှင့်ဆန့်ကျင်ရာကိုသွားရင်တောင်မှ၊ နေရာမှာ စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိနေလိမ့်မည်ဆိုတာ သေချာပါစေ။
အခြေခံသုံးသပ်ချက်အပေါ် မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ၊ ပိတ်ရက်တွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို စစ်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ Brexit စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းလို အရေးကြီးဖြစ်ရပ်များ၊ ထရမ့်၏ မိန့်ခွန်းများ၊ NAFTA စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ စသည်တို့သည် ပိတ်ရက်များတွင် စီစဉ်ခဲ့ပါက၊ အရောင်းအဝယ်များကို ပိတ်ထားဖို့သင့်ပါသည်။ ဘယ်လိုသတင်းထွက်လာမလဲ၊ ဈေးကွက်က ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲဆိုတာ သင်မသိနိုင်ဘူးလေ။
ပိတ်ရက်အလွန်တွင် အရောင်းအဝယ်ကို ဆက်ဖွင့်ထားရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ရှုံးသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မကြိုးစားဖို့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလား? ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင့်အမြတ်နှင့် အရှုံးများအားလုံးကို ခြေရာခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆီ ခေါ်ဆောင်သွားမည့် သင့်ကိုယ်ပိုင် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာကို ဖန်တီးတာက သင့်အတွက် ပိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
ဈေးကွက်ကိုသာမက သင့်ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့် အရေးကြီးအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ပိတ်ရက်လွန်ပြီး အရောင်းအဝယ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါစို့၊ ဘယ်လိုသတင်းမျိုး ထုတ်ပြန်မလဲ၊ တနင်္လာနေ့မှာ ဈေးကွက်က ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေမလဲဆိုတာ သင်မသိရပါဘူး။ ပိတ်ရက်ကိုကျော်ပြီး စိတ်ဖိစီးနေရင်း၊ တနင်္လာနေ့အတွက် ချွေးပြန်နေဖို့ အသင့်ပဲလား? မဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ ဒူးတုန်မနေဘဲ၊ တနင်္လာနေ့မနက်မှာ ခေါင်းရှင်းရှင်းနဲ့ စတင်ရောင်းဝယ်ပါ။ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး၊ စွန့်စားရဲရင်၊ ပိတ်ရက်လွန်ပြီး ရောင်းဝယ်ခြင်းဟာ သင့်အတွက် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးများကို စဉ်းစားပြီး၊ ပိတ်ရက်တွေဟာ သင့်အတွက် ကြောက်စရာမဖြစ်လာဘူးဆိုတာ သေချာပါစေ။
နိဂုံးချုပ်ရသော်၊ ပိတ်ရက်လွန်ပြီး အရောင်းအဝယ်ဖွင့်ထားပြီး၊ အမြတ်ကြီးကြီးကို မျှော်လင့်မလား (သို့) တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲ အမြတ်ရနိုင်ချေတွေကို ကန့်သတ်မလားဆိုတာ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ သင့်စိတ်ထဲ ဒီမေးခွန်းပေါ်လာရင်၊ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်များအားလုံးကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ၊ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပိုလွယ်ကူလာပါလိမ့်မည်။